जात्रै जात्रा : यसरी छिचोले फिल्म बनाउँदाका 'जात्रा'हरु :: PahiloPost
16th May 2019, 03:33 pm | २ जेठ २०७६
फिल्म 'जात्रा'को युट्युब रिलिजपछि त्यसको सिक्वेलबारे सोध्नेको सङ्ख्या ह्वात्तै बढ्यो। जम्मा सत्र दिनमा लेखिएको जात्राको कथालाई निरन्तरता दिनेबारे सोचेको पनि थिएनन्, लेखक तथा निर्देशक प्रदीप भट्टराईले। तर, फिल्मले समीक्षकमात्र नभएर दर्शकको पनि मन जित्यो। तिनै दर्शकको प्रश्नले नै उनलाई सोच्न् बाध्य बनायो।
'नेपालमा त फिल्मको सिक्वेल बनेकै रहेनछ। केही व्यवसायिक रुपमा सफल फिल्महरु दुई तीन भागसम्म बने तर ती सिक्वेल होइनन्,' उनले त्यो अनुसन्धानको सारांश सुनाए, 'मलाई ब्रान्ड भ्यालु क्यास गर्न सिरिज बनाउनु थिएन। त्यसैले सिक्वेलकै लागि टिमसँग छलफल सुरु गरेँ।'
निर्देशक भट्टराईले सुनाए, 'हेभी सिन सात आठ दिनसम्म राखिनँ। लाइट सिक्वेन्स गर्दै जाँदा कलाकार फर्ममा आए। अभिनयको पाटो जात्राको सशक्त थियो। त्यसका लागि स्क्रिप्टमा हामीले मिहेनत गरेसरह कलाकारले मेहनत गर्नुभयो।'
पोस्ट प्रोडक्सनको काम सकेर बसेका उनी फिल्म राम्रो बनेकोमा निर्धक्क सुनिए। अस्ट्रेलिया रिलिजका लागि सेन्सर गर्न फिल्म पठाइसकेका छन्। भने, 'फिल्मले दर्शकलाई बाँध्छ। एक मिनेट पनि ध्यान बाहिर जान दिँदैन। तर, यो आत्मविश्वास चाहिँ यथार्थमा भोग्नु परेको जात्राले दिलाएको हो।'
सन्दर्भ गएको मंसिर तीन गतेको। रातको दश बजिसकेको थियो। बालाजुमा फिल्म 'जात्रै जात्रा' छायाङ्कन भइरहेको थियो। सुटिङ जारी राख्ने मुडमा थिए, कलाकार पनि। नयाँ सिन खिच्न थाले त दुईदेखि तीन घण्टामै काम सकिन्थ्यो। तर, रातभर काम गर्दा भोलिपल्ट मुड बिग्रने डरमा थिए, प्रदीप। त्यसैले अनायसै बोले - 'प्याक अप'।
अचानक केही तलतिरबाट निर्माता यादव पौडेल चिच्याएको सुनियो 'ला हो र? ल बर्बाद भयो।'
‘विपिन सर त रुन पो थाल्नुभयो। खुट्टामा ड्रेसिङ गरिएको थिएन। अपरेसन गर्नुपर्छ, पर्दैन थाहा थिएन। उहाँ त फिल्म के हुन्छ? मैले गर्दा सुटिङ रोकिने भयो भन्दै रुन थाल्नु भयो,’ प्रदीपले भने, 'कामको मामलामा उहाँको गाम्भीर्यता सधैँ यस्तै हो।’
छाउनीस्थित एउटा डोजर सोरुममा छायाङ्कन हुँदै थियो। प्रदीपले आवश्यक ब्लकिङ गरे। पोजिसन मिलाए। एउटा नयाँ डोजर राखेको मिल्दै मिलेन। त्यसैलाई उठाउन खोज्दा छेउको पर्खाल भत्कियो। त्यसपछि बल्ल थाहा भयो - त्यो त आर्मी ब्यारेकको पर्खाल रहेछ।
पुलिस आए। पर्खाल बनाइदिने सहमति भने भयो। अनि सुटिङका लागि अनुमति पाए। ‘त्यत्रो लफडापछि कहाँ सुटिङको मुड बन्थ्यो?,’ प्रदीपले सुनाए, 'बजेट यसै पनि बढ्यो। त्यसैले त्यो दिन पनि खिचेनौं।’
'जात्रा कुनै घरमा भएको ब्रतवन्ध थियो। जात्रै जात्रा बिहे हो। ब्रतवन्धमा भन्दा ठूलो भोज, धेरै परिकार, बाजागाजा, छुटेका पाहुना बिहेमा देख्न सकिनेछ,’ प्रदीप भन्छन्, 'पहिलेको भन्दा ठूलो क्यान्भासमा छुटेका धेरै चिज पाउनु हुनेछ।’
जात्रै जात्रा : यसरी छिचोले फिल्म बनाउँदाका 'जात्रा'हरु को लागी कुनै प्रतिक्रिया उपलब्ध छैन ।